Gịnị mere ị ga-eji bịa biri na France? Ike nke ọrụ na France
Edere site Tranquillus | June 5, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Mba ọ bụla nwere iwu nke ọrụ ya, ha niile nwekwara uru na ọghọm ha dabere na ọnọdụ ahụ. Kedu ihe bụ akụ nke France? Gịnị mere o ji adọrọ mmasị ịbịa rụọ ọrụ na France?
Ike nke France
France bụ mba Europe ebe ọrụ na-adọrọ mmasị, ọ dịkwa ọtụtụ ihe nwere ike ime. E wezụga nrọ nke ọ na-eburu n'uche ọtụtụ mba mba ọzọọ dị elu karịa obodo niile nwere akụ na ụba nke na-eche na ọ ga-enye ndị ọrụ ọrụ dị mkpa.
Obodo mara mma maka ndị gụsịrị akwụkwọ na-eto eto
France nwere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a ma ama gburugburu ụwa. Ndị ọkachamara na-eto eto si mba ọzọ nabatara nke ọma na mpaghara ahụ. Ihe ọmụma, nkà na ọhụụ ha bụ ihe atụ siri ike gbakwunyere na ndị gọọmenti na ndị were ọrụ maara nke a nke ọma. Ọ bụ ya mere o ji dị mfe ịbịa iji dozie na France ma rụọ ọrụ na ya.
Awa iri atọ na ise na SMIC
Na France, ndị ọrụ na-enweta nkwekọrịta ahụ ruo awa iri atọ na ise n'izu. Nke a na-eme ka o kwe omume ịmepụta ndụ na-enweghị ike ịchọta ọtụtụ ọrụ, na iji hụ na ego kachasị elu na njedebe nke ọnwa ọ bụla. Ozokwa, ọ ga-ekwe omume ijikọta ọtụtụ ọrụ maka ndị chọrọ inyefe onwe ha n'ụzọ zuru ezu na ndụ ha. Ọ bụghị mba niile na-enye nchebe ọrụ a.
N'aka nke ọzọ, France ewepụtawo ụgwọ kacha nta, nke a na-akpọ SMIC. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke awa. N'agbanyeghị agbanyeghị ọnọdụ, maka ọrụ 151 kwa ọnwa, ndị ọrụ na-emesi obi ike na ha ga-enweta ụgwọ ọrụ ha. A naghị ekwe ka ndị na-arụ ọrụ nye onyinye n'okpuru oge ọnụego a.
GỤỌ Ụgbọ njem na France
Kwa ọnwa ọrụ na-enye ikike ụbọchị abụọ na ọkara nke ezumike ịkwụ ụgwọ, nke dabara izu ise kwa afọ. Ọ bụ ikike inweta ma ndị ọrụ nile na-erite uru na ya. N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ ndị na-arụ ọrụ awa iri atọ na itoolu kwa izu na-ejikọta RTTs. Ya mere, ha na-enweta ngụkọta nke izu iri maka ịkwụ ụgwọ a na-akwụ kwa afọ, nke dị mkpa.
Ndị na-edebanye aha nkwekọrịta ọrụ maka oge ebighị ebi na-echebe. N'ezie, ọ na-esiri ndị ọrụ ike iwepụ onye ọrụ na nkwekọrịta na-adịgide adịgide. Na France, iwu oru iwu na-echebe ndị ọrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na a chụpụrụ ya, ndị ọrụ na-enweta uru ọrụ na-enweghị ọrụ maka ọnwa anọ kachasị, ma mgbe ụfọdụ maka afọ atọ mgbe ụbọchị nchụpụ gasịrị. Ọ dabere na oge nke ọrụ gara aga. Ka o sina dị, ọ na-enye nchebe ma na-enye oge dị jụụ ịchọta ọrụ na France.
Ịdị ike nke akụ na ụba French
France bụ mba siri ike na akụ na ụba nke na-ejide onwe ya n'ọnọdụ akụ na ụba ụwa. Obodo a mara mma nke ukwuu n'anya ndị na-etinye ego na-anaghị ala azụ itinye ntụkwasị obi ha na etu esi ama French. Ọ na - enweta 6% nke azụmaahịa ụwa na 5% nke GDP ụwa.
N'uwa zuru ụwa ọnụ, mba ahụ dị n'elu ụlọ ọrụ ndị dị oké ọnụ ahịa, nke abụọ na nnukwu ụlọ ahịa na ọrụ ugbo. N'ihe banyere arụpụta ihe, France nọ n'ọnọdụ atọ n'ime ụwa. Ya mere, mba a na-enye ya nke ọma dịka otu ọha mmadụ dị elu. Ụlọ ọrụ 39 French nọ n'etiti ụlọ ọrụ 500 kachasị n'ụwa.
GỤỌ Akaụntụ Ọzụzụ nkeonwe (CPF)
Mmetụta nke ịmara French
" mere na France Bụ nkwa nke enwere ekele maka uru ọ bara n'ụwa niile. Ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ na France nwere akọ na uche ma na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu mgbe niile. Na mkpokọta, enwere 920 nka oru. Workingrụ ọrụ na France na-enye gị ohere ịmụ ma tinye usoro ọrụ dị elu a ghọtara na ụwa niile.
France bụ mba ebe nnukwu ụlọ ọrụ na-etinye ntụkwasị obi maka mmezu ngwaahịa ha. A na-akwado ndị ahịa n'ozuzu ha ma mba ndị mba ọzọ bụ ndị na-amịpụta ihe na ngwaahịa. Irite uru site na French na-enyere ndị mba ọzọ aka inweta ahụmahụ.
Ụdị ụlọ ọrụ mmụta
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ndị mba ọzọ na-amụ na France na olileanya nke ịchọta ọrụ na-akwụ ụgwọ. N'ezie, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ dị elu nke French dị elu. Ha na-emekarị ka ha nwee ike ịchọta ọrụ na mpaghara ahụ achọrọ na njedebe nke ọmụmụ ihe. Na mgbakwunye, ọ na-eme na ndị nwe obodo ga-abanye na France ma rụọ ọrụ n'ebe ahụ inye ụmụ ha ohere nke ohere ịga akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ mahadum. Na mgbakwunye na ịchọta ụdị nchedo, ha na-enye ohere dị ukwuu maka ụmụ ha ịnweta ọrụ nke nhọrọ ha.
A na - edepụtara France n'etiti mba kachasị elu na ọnọdụ ndụ. Ngụgụ na ohere a na-adọrọ mmasị ndị mba ọzọ. Ibi na France na-enye gị ohere ịnweta otu n'ime usoro ahụ ike ndị kasị egwu egwu n'ụwa. Ndị WHO na-ede ụzọ France mbụ n'ọtụtụ oge. Ụmụ akwụkwọ mba ọzọ na-eritekwa uru site na nchebe ọha na eze nke France.
Tụkwasị na nke a, France nwere otu n'ime ogologo ndụ kachasị ogologo n'ụwa. Nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi usoro ahụike na àgwà nlekọta e nyere. Ọtụtụ ndị mba ọzọ na-ahọrọ ịbịa iji dozie na France iji rite uru na ndụ nke a.
N'ikpeazụ, ọnụahịa nke ngwaahịa na ọrụ dị na France dịka nkezi ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ mba ndị ọzọ gburugburu ụwa.
France nwere ọdịbendị bara ọgaranya nke na-adọta mmasị ịmata gburugburu ụwa. Ya mere, ọ na-eme na ndị mba ọzọ bịara ịbanye ma rụọ ọrụ na France iji tinye onwe ha n'ọrụ na nkọwa nke mba ahụ, mụta asụsụ ahụ ma chọpụta ebe ọhụụ ọhụrụ. N'ụwa, France nwere ezigbo aha maka ndụ ya.
Mba ndị mba ọzọ na-ahọrọ France maka mmetụta ya, ike akụ na ụba ya na nchedo ndị ọrụ. Iri iri atọ na ise na ezumike ezumike bụ ihe ùgwù ndị ọrụ French na-enweta. N'ihi ya, ọ bụghị mba niile na-enye ha ọrụ. Mba ndị mba ọzọ na-abịa maka ndụ na nchekwa ọrụ mgbe ha na-aga France.
Gịnị mere ị ga-eji dozie ma rụọ ọrụ na France? Mee 14th, 2020Tranquillus
gara agaKedu ka ị ga-esi ghara iwe iwe?
-esonụKedu otu esi ahazi sava arụ ọrụ gị?